Nagarik News - ध्रुवसत्य ६ एकान ६ !
16 Jan 2014 | 09:55am
फिल्म: ६ एकान ६
निर्देशक: दिनेश डिसी
लेखक: जगदीश्वर थापा र दीपकराज गिरी
निर्माता: दीपकराज गिरी, दीपाश्री, निर्मल शर्मा
कलाकार: निता ढुंगाना, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, सीताराम कट्टेल, केदार घिमिरे, सन्दीप क्षेत्री, शिवहरि पौडेल, अर्जुन श्रेष्ठ, राजवल्लभ कोइराला, शैलेस आचार्य, नीर शाह आदि।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच तालमेल मिलिसकेको छैन। मिले पनि कस्तो साँठगाँठ चल्ने हो, टुंगो छैन। कमेडियनहरुका प्रमुख तीन दल 'तीतो सत्य', 'मेरी बास्सै' र 'जिरे खुर्सानी'ले भने उदाहरणीय मेलमिलाप प्रदर्शन गरिसकेका छन्। फिल्म '६ एकान ६' यसैको नतिजा हो।
दिनेश डिसीद्वारा निर्देशित रोमान्टिक कमेडी '६ एकान ६' नेपाली फिल्मका दर्शकका लागि एउटा 'सरप्राइज गिफ्ट' हो। टेलिभिजनहरुमा सिट–कम (सिचुयसनल कमेडी) पस्किरहेका कलाकारहरुले '६ एकान ६'लाई गाईजात्रे कार्यक्रमजस्तै 'स्ट्यान्ड अप कमेडी'मै सीमित गरेका होलान् भन्ने धेरैको अनुमान थियो। आखिर निर्देशक डिसी पनि कुनै जमानामा टेलिभिजनका लागि 'ट्वाक्क टुक्क' नामक 'स्केच कमेडी' बनाउँथे।
टेलिभिजनमा 'तीतो सत्य'नामक कमेडीको कारखाना चलाइरहेका दीपकराज गिरी, दीपाश्री र निर्मल शर्मा '६ एकान ६'का लगानीकर्ता हुन्। त्यसैले यसको संरचना 'तीतो सत्य'को भन्दा फरक हुनुपर्ने चुनौती थियो। टिभी र फिल्मको 'दृश्य भाषा' फरक हुन्छ। '६ एकान ६'मा निर्देशक डिसी र छायाँकार पुरुषोत्तम प्रधानले फिल्ममा बढी प्रयोग हुने 'सट साइज'लाई प्राथमिकता दिएका छन्। जसले गर्दा यसको लुक्स पहिलो दृश्यदेखि नै सिनेमामय लाग्छ।
दर्शकलाई हँसाउने नाममा 'ट्वाइलेट ह्युमर' थुपार्ने रोग पछिल्लो समय नेपाली फिल्मकर्मीलाई लागेको थियो। '६ एकान ६' यसबाट मुक्त छ। घिनलाग्दा सिक्वेन्स राखेर फिल्मलाई छाडा बनायो भन्ने आरोप यसलाई लाग्दैन।
सुरुवातमै मुख्य पात्रको लक्ष्य प्रष्ट पारेपछि कथा भटाभट अघि बढ्छ। एक महिनाभित्रै बिहे गर्नुपर्ने ग्रहदशा परेपछि आस्था(निता ढुंगाना) केटा खोज्ने र बु‰ने अभियानमा लाग्छे। त्यस क्रममा उसको ६ जना पुरुषसँग जम्काभेट हुन्छ। ऊ र ती पुरुषहरुको 'केमिस्ट्री'मा छचल्किँदै कथा गन्तव्यसम्म पुग्छ।
आस्थाले झेल्ने व्यापारी, वकिल, प्रहरी, कवि, सुकुम्बासी र नोकरका 'चरित्र चित्रण' खँदिला छन्। थोरै 'स्पेस' पाए पनि तुलनात्मक रुपमा गतिलो छवि छाडेर जान्छन् सबै पात्र। उनीहरुसँगको संगतले आस्थाको संवेदना परिपक्व हुँदै जान्छ।
उमेर र धन दुवै खिइँदै गएको व्यापारी (शिवहरि पौडेल) आफूलाई सकेसम्म ढाकछोप गर्छ। निकै धनी भएको फुर्ति देखाए पनि ऊ कन्जुस हुन्छ। अरुको धनमा आँखा गाड्छ।
आफूलाई प्रष्ट छविको मान्ने तर सित्तैमा वकालत नगर्ने चरित्र वकिल (जितु नेपाल)को हुन्छ। ऊ नारी अधिकारको पक्षमा खुब वकालत गर्छ। तर, पारिश्रमिकको रुपमा नारीलाई नै ब्ल्याकमेल गर्न पछि पर्दैन।
चुलबुल पाण्डेको डुप्लिकेट चन्चल पाण्डे नामक प्रहरी (दीपकराज गिरी)को गेटअप जति कृत्रिम र भद्दा लाग्छ, उसले देखाउने हरकत तथा चमत्कार पनि नाटकीय ठहर्छ। चन्चलले जुँगा पालेर पुरुषत्वको धमास दिनेहरुप्रति कटाक्ष गर्छ। नेपाली समाजमा प्रहरीको जुन परम्परागत पहिचान छ, त्यस्तै छ ऊ।
कवि पात्र (सन्दीप क्षेत्री)ले साहित्यकार, कलाकार र समस्त सेलिब्रिटीकै प्रतिनिधित्व गर्छ। ऊ आफ्नो भाषा र संस्कारप्रति आदर्श बोक्छ। तर, सानो 'परीक्षा'मा आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन। पतित हुन्छ।
धनी भएर महलमा बस्ने लोभ पलाए पनि सुकुम्बासी पात्र (केदार घिमिरे) आफूलाई दुःखमा साथ दिने साथीभाइ र झुपडबस्तीलाई धोका दिन तयार हुँदैन। पैसा नभए पनि ऊ इमानले धनी छ। भव्य बंगलामा 'ट्वाइलेट कता छ' भनेर सोध्ने ऊ भित्रैदेखि सच्चा पात्र देखिन्छ।
मालिकहरुको स्याहारसुसार गर्दागर्दै आफ्नो जीवनबारे सही निर्णय लिन नसक्ने सीताराम(सीताराम कट्टेल)को विवशता हृदयविदारक छ। आफूले सोच्दै नसोचेको 'सुवर्ण अवसर' हात पर्दा सीताराम तिल्मिलाउँछ। अन्ततः उसले व्यावहारिक बाटो नै रोज्छ।
आस्था नामक 'चरी'लाई रिभोल्भरका ६ वटै 'गोली' प्रहार गरिन्छ। गोली प्रहार गर्ने 'भिलेन' आस्थाकै वरिपरिको हुन्छ। कुन 'गोली'ले निशाना लाग्छ, कुन खेर जान्छ? फिल्ममा निकै चलाखीका साथ 'सस्पेन्स'का शृंखलाहरु बुनिएको छ।
आस्थाका लागि खडा गरिएका 'ब्याचेलर'हरुको रोलक्रम धेरैजसो युवतीहरुको रोजाइसँग मिल्छ। आजको जमानामा एउटी युवतीले आफ्नो सम्भावित दुलहा रोज्दा सबैभन्दा पहिले धन (व्यापारी) नै हेर्छे। त्यसपछि ज्ञान (वकिल), सुरक्षा (प्रहरी), रोमान्स (कवि), इमान (सुकुम्बासी) र सेवा (नोकर) उसको प्राथमिकतामा पर्छ। '६ एकान ६'ले यो मनोविज्ञानलाई टपक्क टिपेको पाइन्छ।
समाजमा आदर्शवान व्यक्तिहरुको उपस्थिति बाक्लो छ। आस्था, संस्कृति र राष्ट्रियतासँग जोडिएका आदर्श धेरैले फलाकिरहेका देखिन्छन्। तर ती आदर्श टिकाउ भने हुँदैनन्। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वा मजबुरीका कारण आदर्शलाई लत्याउन धेरै विवश छन्। यो 'तीतो सत्य'लाई '६ एकान ६'ले 'होलसेल'मै व्यंग्य गर्छ।
आफ्नो अगाडि उभ्याइएका पुरुषहरुलाई आस्थाले तुरुन्तै मन पराइहाल्नुको बलियो प्रमाण जुटाउन फिल्मले सकेको छैन। पण्डितले चिना होइन पात्रो हेरेर ग्रहदशा केलाएको एउटा दृश्य असहज लाग्छ। अन्तिम १० मिनेटका 'घुम्ती'हरु अतिरञ्जित छन्।
केही त्रुटिहरु भए पनि एउटा स्वच्छ र हल्काफुल्का कमेडी फिल्मको दर्जामा '६ एकान ६'लाई राख्न सकिन्छ। आफूलाई 'मूल धार'का ठान्ने फिल्मकर्मीहरु 'एक्सन कट'को हिसाबमा पटकपटक फेल हुँदै आएका थिए। यो '६ एकान ६'ले भने उनीहरुलाई सही सन्देश दिएको छ। त्यो हो, फिल्म बनाउँदा पनि '६ एकान ६' नै हुन्छ!
« सधैं मिठा हुँदैन बितेका पल दर्शकले पाउनसक्छ मोक्ष »